Xogo Shaaciyey Sababta Ingiriisku u doortay inuu Somaliland kala xidhiidho Safaaraddiisa Itoobiya. |
Xogo Shaaciyey Sababta Ingiriisku u doortay inuu Somaliland kala xidhiidho Safaaraddiisa Itoobiya.
Hargeisa (GNN)-Waa maxay kaalinta Ingiriisku u arko in Itoobiya ka qaadan karto Siyaasadda Somaliland?
Wasaaradda Arrimaha Dibedda Boqortooyada Ingiriiska, ayaa sheegtay inay xidhiidhkeeda Somaliland ka maamuli doonaan Safaaradda ay ku leeyihiin Itoobiya, kana madax-banaan Xafiiska ay ka maamulaan Soomaaliya ee Safaaraddooda Kenya, sida xogo Shabakadda Wikileaks helay lagu shaaciyey.
Xogaha Shabakada Wikileaks faafisay oo loo gudbiyey Hay’adaha Ammaanka ee dawladaha Maraykanka iyo Ingiriiska bishii September 2010, ayaa lagu sheegay inkastoo Ingiriisku Somaliland u aqoonsanayn dal madax-bannaan, haddana Wasaaradda Arrimaha Dibedda Ingiriisku waxay aamminsan tahay inay saaxiib muhiim ah ka noqon karto Siyaasaddooda Geeska Afrika.
Xasillooni ka jirta Somaliland, ayuu Ingiriisku u arkaa inay fure u noqon karto haddii dhaawac gaadha laga ilaaliyo xasilinta Soomaaliya. Waxaanu Ingiriisku sheegay inay ka caawin doonaan Somaliland la socodka rakaabka diyaaradaha, dhulka iyo goobaha xuduudaha laga soo galo dalkeeda, inkastoo ay aamminsan yihiin in dadka sharci-darrada ku safrayaa ka leexdaan goobaha baadhitaannada ee Kaantarroollada.
Xogaha Wikileaks, ayaa sidoo kale lagu sheegay in Ingiriisku kala shaqeyn doono Somaliland sare u qaadka dhismaha Ciidammada Booliiska, isla markaana heshiis iskaashi la saxeexan doonaan. Waxa kale oo Xogahan lagu sheegay in Xukuumadda Ingiriisku u aragto Itoobiya mid wax weyn ka geysan doonta xasilinta Somaliland dhinaca Siyaasadda iyo diblomaasiyada.